स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गरिएका छन् | गृहपृष्ठ
Home विकास स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गरिएका छन्
on: June 06, 2018 विकास
स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गरिएका छन्
नारायणप्रसाद सापकोटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बागलुङ नगरपालिका
चार नगरपालिका र ६ ओटा गाउँपालिका रहेको बागलुङका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएसँगै विकास निर्माणले गति लिन थालेको छ । सोहीअनुसार बागलुङको पुरानो र सदरमुकामसमेत रहेको बागलुङ नगरपालिकाले योजनासहित विकासका काम अघि बढाएको छ । प्रस्तुत छ, यस नगरपालिकामा भइरहेका विकास गतिविधि, कार्यप्रगति, आगामी योजनालगायत विषयमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद सापकोटास“ग आर्थिक अभियानले गरेको कुराकानीको सार :
तपाईं बागलुङ नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आएपछि विकासका काम कसरी अगाडि बढेका छन् ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम विकास निर्माणका काम अगाडि बढाएका छौं । वडास्तरबाट आएका योजना कार्यपालिका बैठक हुँदै नगरसभाबाट पारित गरिन्छ । सोही आधारमा बजेटको सुनिश्चितता गरेका छौं । हाल नगरका १४ ओटै वडामा विकास निर्माणका काम द्रुत गतिमा अघि बढेका छन् ।
नगरपालिकाका आगामी योजना के के छन् ?
आगामी आवमा सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रम आगामी नगरसभा बैठकले निर्धारण गर्छ । नगरस्तरको योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अख्तियारी र बजेट स्थानीय सरकारको व्यवस्थापिकाले दिने हो । हाम्रो व्यवस्थापिका नगरसभा हो । अहिले नगरसभापूर्वको तयारी गरिरहेका छौं । आगामी आवका लागि रू. १ अर्ब ५५ करोड बजेट सीमा तोकेका छौं । यसमा संशोधन पनि हुन सक्छ । नगरको विकासका लागि स्थानीय जनादेश र टोलबस्तीबाट आएका योजना र प्राथमिकताका योजना सञ्चालन गर्नेछौं । स्थानीयको आवश्यकताका आधारमा छनोट भएका योजना मात्र कार्यान्वयनमा लैजानेछौं । ठोस र दिगो विकासका आधार तय गर्ने खालका कार्यक्रमलाई आगामी नगरसभाले प्राथमिकता दिनेछ । विकासलाई उद्यामशीलतासँग जोड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।
हामीले दिगो र ठोस योजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छौं । नगरसभाले स्वीकृत गरेका योजना कार्यान्वयन भइरहेका छन् । नगरपालिकाभित्र ठूला पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा बोलपत्रमार्फत ठेकेदारलाई दिएका छौं । सोहीअनुसार काम अघि बढेको छ । सडकलगायत ठूला पूर्वाधारको डीपीआरसमेत परामर्शदाता छनोट गरेर तयार पार्दै छौं ।
नगरको आवश्यकता र स्थानीयको मागका आधारमा दिगो विकास एवम् उद्यमशीलता प्रवद्र्धन हुने खालका योजनालाई प्राथमिकता दिएका छौं ।
कानूनले तोकेका कर असुलीको अवस्था सन्तोषजनक छ । यद्यपि, अपेक्षित रूपमा कर सङ्कलन हुन सकेको छैन । आगामी दिन करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउने प्रयासमा छौं ।
बसपार्क, उद्यान, सौर्यबत्ती निर्माण प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
नगर विकास कोष, काठमाडौंको वित्तीय अनुदान एवम् सहुलियत ऋण सहयोगमा वडा नंं ४ को उपल्लाचौरमा आधुनिक बसपार्क बनाउन बोलपत्र प्रकाशित गरिसकेका छौं । छिट्टै निर्माण शुरू हुनेछ । उद्यान निर्माणका लागि समेत प्रभु बैकसँग एमओयू भइसकेको छ । सौर्यबत्ती जडानका लागि योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै छौं ।
नगरपालिकामा मापदण्डविपरीत घर, टहरा कसरी व्यवस्थित गरिँदै छ ?
मापदण्डविपरीत बनेका घरको विवरण प्राविधिक टोलीले तयार गरी प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । कानूनबमोजिम कारबाही अघि बढाइने छ । नगरपालिकाले तोकेको मापदण्डविपरीतका नक्सा स्वीकृत हुँदैन ।
पानी पर्नासाथ ढलहरू भरिएर बजार डुबानमा पर्ने गरेको छ । यसको दिगो व्यवस्थापन गर्न कस्तो योजना छ ?
यो समस्या समाधानका लागि नगरपालिकाले पहल थालेको छ । हालै नागरोडमा काम शुरू गरेका छौं । सबै बजार क्षेत्रमा ढल व्यवस्थापनको योजना कार्यान्वयनमा गर्दै जानेछौं ।
नगरपालिकाको काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको गुनासा आउने गरेका छन् नि !
सार्वजनिक निकाय एवम् सबैको स्थानीय सरकार भएकाले गुनासाहरू आउनु स्वाभाविक हो । यद्यपि, नगरवासीका गुनासा नआउनेगरी काम अगाडि बढाएका छौं । नगरवासीको काम छिटोछरितो सम्पन्न गर्न सबै कर्मचारीलाई जिम्मेवारीसमेत तोकेका छांै । वडासचिव र वडा कार्यालयका कर्मचारीलाई राम्रो प्रशिक्षण दिएका छौं । नगरवासीलाई सहज र शिष्ट शैलीको व्यवहारसहित सेवा प्रवाह गर्न सहजीकरण र परामर्श भइरहेको छ ।
सदरमुकामदेखि बागलुङ नगरपालिकाको कार्यालय टाढा हुँदा सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ । यसको व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ ?
सान्दर्भिक प्रश्नका लागि धन्यवाद ! स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, को दफा १०४ ले विषयगत कार्यालयको सम्पत्ति, दायित्व तथा बजेटको स्थान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस विषयमा स्थानीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयबाट समेत थप जानकारी र निर्देशन आउने अपेक्षा छ । सम्भवतः आगामी आवको शुरूदेखि नै बागलुङ बजारमा रहेका विषयगत कार्यालयका खाली भवनबाट नगरपालिकाले आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । यसमा सङ्घीय सरकारको निर्देशन र परामर्शबमोजिम अगाडि बढ्नेछौं ।
नगरपालिकाको तर्फबाट भन्नुपर्ने केही छ कि ?
नगरवासी सेवाग्राही पनि, करदाता पनि हुन् । नगरवासीले दिएको कर तथा राजस्वको सही परिचालन हुनुपर्छ । वास्तवमा सेवाग्राही सीधा र पूर्वाग्रहरहित हुन्छन् र हुन् पनि । तर, सीमित स्वार्थ भएका केही समूहको प्रोपोगाण्डा (हौवा)ले कर्मचारीतन्त्रको सेवा प्रवाह र निर्णयप्रति शङ्का र भ्रम उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले, यस्ता भ्रममा नपर्न स्थानीय नगरवासीलाई अनुरोध गर्दछु ।